प्रधानमन्त्रीले चाहे चुड्कीको भरमा डा. केसीका माग सम्बोधन हुन्छ : गगन थापा - अडियो न्युज - Radio Kantipur
प्रधानमन्त्रीले चाहे चुड्कीको भरमा डा. केसीका माग सम्बोधन हुन्छ : गगन थापा
The Headliners with Khagraj Adhikari | Radio Journalist Basu | 10 January 2019
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले इलाममा १६ औं चरणको अनसन सुरु गरेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले डा. केसीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले उहाँको अनसनमा साथ दिने थापाले बताउनुभयो । रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा कुरा गर्दै नेता थापाले डा. केसीसँग भएका सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भएकाले आफुहरुले फरक मत राखेको बताउनुभयो । विधेयक संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्रीले चाहे केसीका माग सम्वोधन गरेर विधेयक पारित गर्न सकिने बताउनुभयो ।